हेर्न नसकिने भिडियोमा चर्चित नेतृको अनुहार राखेर मोटो रकम नदिएर भिडियो भाइरल ! – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > हेर्न नसकिने भिडियोमा चर्चित नेतृको अनुहार राखेर मोटो रकम नदिएर भिडियो भाइरल !
हेर्न नसकिने भिडियोमा चर्चित नेतृको अनुहार राखेर मोटो रकम नदिएर भिडियो भाइरल !
admin January 3, 2021 January 3, 2021 मनोरञ्जन	0
काठमाडौं । एक चर्चित नेतृको सम्पादन गरेको भिडियो भाइरल भएको छ । दुनियाँको मनमा बसेकी नेतृलाई असर पुर्याउन कसैले गलत गरेको विषय अहिले भारतमा चर्चामा छ । भारत, पश्चिम बंगालबाट त्यस्तो समाचार आएको छ । यस बर्ष पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ ।
चुनावका कारणले त्यहाँ राजनीतिक उत्साहीहरू तीव्र भएका छन् । यसैबीच, एक टीएमसी विधायकले दावी गरे कि उनलाई नक्कली भिडियो मार्फत मोलमोलाई गर्न थालिएको छ । यसका साथै उनले प्रहरीमा उजुरी पनि दर्ता गराएका छन् । << भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस >>
मुद्दा उच्च प्रोफाइलको भएका कारण बंगाल प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । उत्तर बंगालको दिनहाटाका टीएमसीका विधायक उदयन गुहाका अनुसार उनलाई अज्ञात नम्बरबाट कल आएको थियो । त्यस समयमा उसले यसलाई बेवास्ता गरे तर पछि उसले उही नम्बरबाट सम्पादन गरिएको भिडियो पठाएको बताइएको छ । त्यो भिडियो सम्पादन गरियो र यसमा विधायकको अनुहार राखियो ।
कल गर्ने व्यक्तिले पछि उनीसँग मोटो रकम माग्न थालिरहेको छ । पैसा नदिए त्यो भिडियो भाइरल बनाउने भनेको खुल्न आएको छ । घटनाको गम्भीरता देखेर तत्कालै विधायक पनि प्रहरी अधिकारीहरूसम्म पुगेर घटनाको जानकारी गराएका हुन् । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानले यसमा संलग्न पश्चिम बंगाल बाहिरको रहेको कुरा पत्ता लगाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उनको खोजी भइरहेको छ । उजुरी पछि, एक अज्ञात व्यक्तिले फेरि विधायकलाई कल गरेको खुलेको छ । साथै थप पैसाको पनि माग गरेको जानकारी दिइएको छ । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विधायक गुहाले २५ डिसेम्बरमा प्रहरीकहाँ उजुरी गरेको बताइएको छ । तिनीहरूलाई निरन्तर माग दावी आइरहेको छ । उसको बिरूद्ध केही गलत भएको पनि खुल्न आएको छ ।
<< भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस >>
नै महिना देखि रोकियको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा यसरी सुरु हुदै !
एउटै पुरुषसँग हुरुक्क भएर २ विबाहित महिला हिँडे, दुवैका लालाबालाको बिचल्ली, दुवैका पति तनावमा, (हेर्नुहोस् भिडियो)
३१ डिसेम्बरसम्म आमाकाे इच्छा पुरा गर्ने कसम खाएका सलमानले साँच्चै पुरा गर्लान् त आमाकाे इच्छा?
दु:खद खबर : टेक अफ हुने क्रममै जहाज दुर्घटना, रहेनन् चार खेलाडी!
मुस्ताङको आकाशमा देखियो प्रकृतिको अनौठो र डरलाग्दो स्वरुप!